सुनापति गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउछौंः विष्ट « Ramechhap News
सुनापति गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउछौंः विष्ट
स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सुनापति गाउँपालिकामा १४ हजार ६ सय ६६ मतदाता रहेका छन् । सुनापति गाउँपालिकामा साबिकका पाँच गाविस समावेश गरिएको छ । ५ वटा वडा रहेको सुनापति गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले माओवादीले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताएको छ । सुनापति गाउँपालिकाबाट माओवादीले अध्यक्षमा पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेको धावा लामालाई उम्मेदवारी दिएका छन् भने उपाध्यक्षमा गिता विष्ट (चौलागाईं)लाई उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादीले सुनापति गाउँपालिकामा चुनावी अभियानलाई तिब्रता दिएको छ ।
गिता विष्ट (चौलागाई) उपाध्यक्षको प्रत्यासी, नेकपा माओवादी केन्द्र,सुनापति गाउँपालिका
सुनापति गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्षका प्रत्यासी गिता विष्ट (चौलागाई) ले गाउँपालिकामा माओवादीको जित सुुनिश्चित रहेको बताएकी छिन् । माओवादीकै कारण अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको बताउदै विष्टले अब गाउँगाउँमा आइपुगेको सिंहदरवारलाई सुदृढ र संस्थागत गरेर जानुपर्ने बताउछिन् ।
दस बर्षे जनयुद्धमा सहभागी भएकी विष्ट शहीद परिवारको सदस्य समेत हुन् । नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको लागि भएको जनयुद्धको क्रममा बुबा कृष्णबहादुर विष्ट (रसकमल) दाई शिखर, भाउजु कविता शिवाकोटी, देवर विष्णु चौंलागाईले जनयुद्धको समयमा शहदात प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
२०५६ सालमा पूर्णकालिन सदस्य हुँदै २०५७ सालबाट जनयुद्धमा सहभागी भएकी विष्ट पार्टीको क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य, जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमाण्डर, विद्यार्थी संगठनका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेदै सक्रियतापूर्वक राजनीतिक गर्दै आएकी छिन् । उनी भन्छिन–जनयुद्धमा लागेर अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएकोमा मलाई गर्व छ, अब परिवर्तन संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व थपिएको छ ।’
सुनापति गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउछौं
निकै लामो त्याग वलिदान र संघर्षबाट अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको हो । सिंंहदरवारको अधिकार जनताको मझेरीमा आइपुगेको छ । राजनैतिक परिवर्तनसँगै अब आर्थिक क्रान्ति र गाउँवस्तीलाई समृद्ध बनाउने दायित्व पनि माओवादीको काँधमा आइपुगेको छ । माओवादीकै कारण अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको हो । परिवर्तित समय र जनताको चाहना अनुसार हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका छौं । यो निर्वाचनले जनताको जीवनमा सकारात्मक रुपान्तरण गर्नेछ । साथै सिंगो देशलाई विकास र समृद्धिको गतिमा अगाडि बढाउन निकै ठूलो भूमिका खेल्ने छ ।
सुनापति गाउँपालिकाभित्र रहेका गरिब शोषित, पीडित, एकल महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, जेष्ठ नागरिकहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु अबको हामो कर्तव्य हो । म सहित सिंगो प्यानलाई नै निर्वाचनमा विजयी गराए सुनापति गाउँपालिकाले समृद्धिको लागि मन बचन र कर्मले काम गर्नेछौं भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु ।
पाँच बर्षको अवधिमा परिवर्तन गरेर देखाउँछौं
सुनापति गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृति पर्यटन लगायतको दृष्टिकोणबाट धनी छ । गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी भएर पनि सही ढंगले उपयोग हुन सकेको छैन् । सुनापति गाउँपालिका विकासको पथमा भर्खर मात्र अगाडि बढेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत गाउँपालिकाको विकास र समृद्धि गर्ने माओवादी प्रतिबद्ध भएर लाग्ने छ । अब बोलीमा होइन व्यवहारमा नै गरेर देखाउछौं । गाउँपालिकामा उद्योग धन्दा स्थापना गर्नेदेखि बेरोजगार युवाहरुको लागि रोजगारी सृजना गर्ने र सुनापति गाउँपालिकाका प्रत्येक जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी काम गछौं । माओवादीको जगमा जसरी राजनैतिक परिवर्तन सम्भव भयो त्यसैगरी नै अब गाउँपालिको विकास गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि माओवादीको काँधमा आइपुगेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन संस्थागतसँगै बर्षौदेखिको जनताको समृद्धिको सपना पनि माओवादीको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ । जसरी माओवादीले विगतमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव गराएर देखाएको छ । अब त्यसैगरी सुनापति गाउँपालिको विकास र समृद्धि पनि गरेर देखाउन दृढ र प्रतिबद्ध छ । माओवादीले अब सुनापति गाउँपालिको गुरु योजना निर्माण गरेर पाँच बर्षको अवधिमा जनतालाई परिवर्तनको सम्भव गराएर देखाउछ ।
सुनापति गाउँपालिकामा बन्ने सुनाकोसी तेस्रो जनलविद्युत आयोजनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । रोजगारीको लागि उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने, कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने, सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन अस्पताल निर्माण गर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, सुनकोसी सिंचाई र खानेपानीलाई उच्च प्राथमिकता दिने काम गर्नेछ ।
सिन्धुली–रामेछाप जोडने खैरेनीघाटको पक्की पुल निर्माण समयमा नै सम्पन्न नहुँदा यहाँका बासिन्दाले निकै सास्ती र हैरानी खेप्दै आएका छन् । यो पुल एक बर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रतिबद्धता अनुसार माओवादीले काम गर्छ । त्यसैगरी सिंदुरेटारमा पक्की पुल बनाउन चौरी खोलाको पक्की पुल निर्माण गर्न, खानीखोला खिम्तीवेसी डहूवेसी हिर्केटार मैरे जोडने पक्की पुल निर्माण कामलाई तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
सुनापति गाउँपालिकालाई यस्तो बनाउन चाहन्छौं
स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहित सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित भएसँगै विकासको मार्गचित्र कस्तो हुने ? स्थानीय तहको नीतिगत संरचना, साधन स्रोतहरुको परिचालन र भौतिक पूर्वाधारहरुको अवस्था कस्तो हुने ? भन्नेमा गाउँपालिका सबै जनताको चासो छ । माओवादीले सुनापति गाउँपालिको स्पष्ट दृष्टिकोणको साथ काम गर्छ ।
सुनापति गाउँपालिकामा दुई बर्ष अघि गएको भुकम्पको कारण भत्किएको निजी अवास निर्माणलाई प्राथमिकता पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन प्रबृद्र्धन गर्न सुनापति डाडाँमा भ्यु टारव निर्माण गरिनेछ । गाउँपालिको सडकको गुरु योजना निर्माण गरेर प्राथमिकताको आधारमा कालोपत्रे र ग्राबिल गरिनेछ । गाउँपालिको दोभनटार, डहुँवेसी, लुभु चौरीखोलको किनारमा रहेका खेती योग्य खेतहरुमा परम्परागत रुपमा भन्दा पनि आधुनिक ढंगले तरकारी खेती रुपमा विकास गरिनेछ । .
समुहवद्ध र योजनावद्ध उत्पादनमा जोड गर्ने, त्यसको सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था गर्ने र बजारीकरणको व्यवस्थित प्रबन्ध गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यातको सामथ्र्य पनि राख्न व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि गाउँपालिकाभित्र एक खाद्यान्न शीत भण्डार, एक आधुनिक डेरी, एक कृषि शिक्षालय वा तालिम केन्द्रको स्थापना गरेर कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।